20 ilo furan oo bilaash ah oo HTML5 ah iyo qaabab CSS3 ah | Abuurista khadka tooska ah
Hoos waxaad ka heli kartaa 20 HTML5 iyo CSS3 shebekadaha internetka oo bilaash ah kaas oo bixiya naqshad weyn iyo dabacsanaan adoo jawaabaya. Kuwaas oo dhan HTML5 arrimo Waxay leeyihiin naqshad wanaagsan waxayna ka kooban yihiin hawlo horumarsan oo ku anfacaya shaqadaada internetka.
Mid ka mid ah wanaagga 20 ka arrimo HTML5 ka jawaabaya adigaa ah waafaqid madal kasta, biraawsar kasta oo ay khaladaadka si fudud ugu qabtaan. Haddii aad raadineyso naqshad websaydhkaaga oo xambaarsan isbeddellada naqshadeynta sannadkan cusub, horay u sii soco oo hel mid ka mid ah sheybaarada jawaabayaasha websaydhka ah.
1 Caawinta Gacanta
2 Baraf baraf
4 Muhiimka ah
9 Shirkadda Agro
10 Costamar Safar
11 Sawirka Weyn
12 hayalka san
13 Hal-abuurka Pixel
15 Ujeedo Qumman
16 Bak Mid
Naqshad xirfad leh, nadiif ah oo nadiif ah taas oo loo habeyn karo baahiyaha isticmaalaha.
Waxaan joognaa jiilaal iyo maxaa ka fiican shaxdan waqtigan iyo taageerayaasha cayaaraha sida barafka. Sidii tii hore oo kale ayaa loo shakhsiyeyn karaa.
Kuwa kale template HTML5 ka jawaabaan in aadan seegi karin.
Oo leh 2 tiir iyo a qaabeynta «go'an Widht» Muhiimku wuxuu noqon karaa template la doonayo.
Template bilaash ah oo loogu talagalay HTML5 laguna sii daayay hoosta Shatiga Caadiga ah ee Caadiga ah 3.0.
HTML5 iyo CSS3 shebekad web ah oo leh a xoojinta midabka buluuga iyo caddaanka ah dhammaan noocyada ganacsiga.
Waxaa loogu talagalay websaydhkaaga, abka qalabka moobaylka, alaabooyin cusub ama ujeedooyin kale. Jawaab leh oo leh waxay u egtahay mid weyn dhammaan noocyada aaladaha.
Template jawaab degello leh mawduuc waxbarasho.
Dhammaan noocyada meheradaha taas oo la xiriirta beeraha tani waa qaabka ugu fiican.
Muunad xirfadle ah oo nadiif ah wakaaladaha socdaalka. Waxay noqon kartaa shakhsi sida aad rabto.
Template kale tayo sare leh.
Un template lacag la'aan ah qalabka mobile. Astaamaha sida sawir gacmeedka iyo wixii intaa ka badan.
Kuwa og ku bilow naqshadeynta websaydhka.
Especial template sawir qaadayaasha, bogagga shaqsiyadeed iyo kuwa shirkadaha.
para wakaalada socdaalka ama hagayaasha dalxiiska.
Waxay u adeegtaa niyada oo dhan ama mawduuc.
Ku saleysan Bootstrap Twitter qaabdhismeedka.
El lahjad cagaaran iyo mugdi madow iyo qaab kale oo laba geesood ah.
cunt qaabab soo jiidasho leh iyo qaabeynta hal bog.
Iyada oo leh 6 qaybood Roller waa wax fiican template sawir qaadayaasha.
Faa'iidada mid ka mid ah kuwan HTML5 arrimo ayaa ah inaad wax ka beddeli karto sidaad u jeceshahay oo aysan u baahnayn dayactir sida ku dhacda qaar ka mid ah maareeyayaasha mawduucyada sida WordPress oo ay tahay inaad cusbooneysiiso fiilooyinka iyo udub-dhexaadka markasta oo yar.
Haddii aad rabto inaad dejiso mashruuc websaydh wax ku ool leh oo leh dhowr meelood oo laga soo deggo, kuwan shebekadaha jawaabta leh Iyagu waa ikhtiyaarka ugu fiican tan iyo marka lagu daro u baahnayn dayactir, waqtigooda rarku wuxuu ka yaraan doonaa kan CMS kasta.
Ma ogtahay meelo badan oo aad ku qaban karto arrimo HTML5 bilaash ah oo wax ka qabta? Faallo noo dhaaf oo noo sheeg ilahaaga si aad u hesho noocyadan ilaha waxtar u leh naqshadeeyayaasha shabakadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Mawduucyada HTML5 ee jawaabta leh
Waad ku mahadsan tahay talooyinka aad ku bixiso boostadan.
Waxay wax weyn u tari doontaa dad badan.
Kiiskeyga waxaan ku iibsaday shay aan ku isticmaalo blogger, waa "Jawaab leh html5" ..
Xaqiiqdu waxay tahay, waxaan u maleynayay markii aan iibsanayay, inay la imaan laheyd hage, si ay iiga caawiso inaan u dhigo sida tusaalaha muunad aan soo iibsado u eg yahay. Laakiin maya, waxba ma aysan keenin, qofkii iga iibiyey kuma haayo wax tilmaam ah boggiisa iyo weliba ... wali ma aanan awoodin inaan adeegsado.
Waxaan raadinayaa qof garanaya sida loo shaqeeyo noocyadan shaxanka ah si aan u codsado adeeggooda oo iga caawiyo inaan ku rakibo baloog tijaabo ah, kaas oo ay tahay inaan koobiyeeyo koodhka oo aan ku dhajiyo barta aan doonayo inaan u isticmaalo.
Haddii aad taqaanid qof, ama naftaada, ma ii sheegi kartaa iyada oo loo marayo faallooyinka halkan?
gacanta bilaashka ah waxaad horeyba u ogtahay sida loo rakibo sheybaarka blogger aniga isla kiiskii ayaan ku jiraa
Ku jawaab super duper
Waad ku mahadsantahay moodalada
wax soo dejin wax ku ool ah oo aad u wanaagsan waxaanan isku dayi doonaa iyaga…. Waan soo noqon doonaa !!!!
Qof ma ii sheegi karaa sida saxda ah ee tixraacayo shaxdan oo kale ah oo leh liisanka Creative Commons 3.0 ee boggeyga internetka?
Waxay leedahay geedo aad u wanaagsan, mahadsanid
Arch Anywhere waxay kuu ogolaaneysaa inaad rakibto Arch Linux adag oo dhakhso leh adigoon waalli ku jirin hawsha